Tilmaamahaaga Iibinta Tilmaamaha La Soco | Martech Zone
Muxuu yahay qorshahaaga weerarka la socoshada tilmaamaha iibka? Waxaan ka baqayaa inaan inta badan gaabinno… la kulanka himilo kadibna aan iska indhatirno dabagalka iyo inaan maskaxda ku hayno. Waa istiraatiijiyad adag in la helo iyo sabab wanaagsan oo loo maalgashado a CRM iyo otomaatiga iibka sida macaamiisheena Salesvue.
SuuqaBridge waa shirkad ku takhasustay isku soo dhaweynta farqiga u dhexeeya suuqgeynta iyo iibinta si loo wanaajiyo awoodda shirkadda ee ah inay soo saarto hagayaal wanaagsan oo ay xirto. Waxay soo saareen macluumaadkan loo yaqaan, 9 Tilmaamood oo ku saabsan sida loola socdo raadadka dhammaan noocyada, kaas oo bixiya qaab-dhismeed aasaasi ah oo loogu talagalay barbaarinta iyo dabagalka.
Sida Loola Soco Hogaamiyaasha Noocyada oo Dhan
Isticmaal Macluumaad weyn si aad wax uga baratid hogaamintaada.
Si sax ah u xulo kaaga jaangooyooyinka.
Jawaab si dhakhso leh u horseeda.
Maamul xiriirka hore.
Adeegso emayl hagaajinta barbaarinta.
Ka qaybgal marka uu hoggaankaagu yahay diyaar u ah inuu hadlo.
Maalgeli si heer sare ah Kheyraadka CRM.
Tixgeli caawinta dibada.
Sii talo bixin free.
Tags: daba-dabagalka hogaankasafarka safarka infographichagaajinta barbaarintahogaaminta barbaarinta infographickobcintahogaaminta iibkaiibinta hoggaanka infographic
Ha eedeyn Rasuulka B2B (Email)
Waad ku mahadsantahay wadaagista, Doug!